बैतडी, चैत २१ - नेपाल टेलिकमको सेवा प्रभावकारी नहुँदा जिल्लाको दुर्गम तल्लोस्वराड क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने गरेका छन् ।जिल्लाको दुर्गम पञ्चेश्वर गाउँपालिका, शिवनाथ गाउँपालिका, मेलौली नगरपालिकाका अधिकांश वडामा नेपाल टेलिकमको नेटवर्कले काम नगर्दा त्यस क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने गरेका छन् ।
युटिएललाई दुई अर्बको आयोजना उपहार!
रवीन्द्र शाही , काठमाडौं,चैत २१ - नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायक युटिएललाई प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबरको विस्तार गर्न अनुदान दिने भएको छ। युुटिएललाई उक्त अनुदान दिनको लागि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले टेन्डरमा प्रकाशित गर्रिको शर्त नै हटाएर म्याद थप गरेको थियो। गोरखाको आरुघाटदेखि रुकुमको मुसिकोटसम्म अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्नको लागि प्राधिकरणले २९ सेप्टेम्बर २०१६ मा सेवाप्रदायकहरुबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो।
एसइई परीक्षार्थीका लागि १ रुपैयाँमा एनसेलको सिम
सेतोपाटी संवाददाता , काठमाडौ, चैत्र १९ - मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलले २०७३ सालको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा सहभागी भएका परीक्षार्थीहरुका लागि ‘पहिलो सिम’ नामक विषेश अफर ल्याएको छ। यस योजना अन्तर्गत परीक्षार्थीले मात्र १ रुपैयाँमा एनसेलको प्रिपेड सिम खरिद गर्न सक्नेछन्।
के फाइदा हुन्छ टिभीमा डिजिटल प्रविधि भएपछि?
बिनोद आचार्य , काठमाडौं, चैत १८ - नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका कार्यकारी निर्देशक राधेश्याम लेकालीले यो प्रविधि अपनाए पश्चात विद्यमान टिभी प्रसारणको गुणस्तरमा आमुल परिवर्तन आउने दाबी गरे। उनका अनुसार हाल ग्राहकले अपनाइरहेको एनालग प्रविधिबाट टिभीको आवाज, भिडियो तथा पिक्चर क्वालिटी तुलनात्मक रुपमा कमजोर हुन्छ। यसलाई सेट­अप बक्स जडान गर्दा त्यसले अडियो र भिडियोलाई डिजिटल प्रशोधन गर्ने र मल्टिप्लेक्स सिग्नल दिने हुनाले डिजिटल टिभीमा गुणस्तरीय पिक्चर र आवाजमा प्रसारण हुने लेकालीको भनाइ छ।
फेसबुक म्यासेन्जरमा आयो 'डिस्लाइक' फिचर !
काठमाडौं, चैत १६ (सेतोपाटी) - फेसबुकले आफ्ना प्रयोगकर्ताका लागि नयाँ नयाँ फिचर ल्याइरहन्छ। यसै क्रममा फेसबुक म्यासेन्जरमा कम्पनीले रमाइलो फिचर थपेको छ। पोस्टमा दिइने रियाक्सन इमोजीबाहेक यसमा डिस्लाइक बटन पनि छ।
३ सय ६० डिग्रीमा फोटो खिच्ने विश्वकै पहिलो फोन
एजेन्सी, चैत १६ - चिनियाँ कम्पनी प्रोट्रुल्लीले ३६० डिग्रीमा फोटो खिच्ने २ वटा स्मार्ट फोन बनाएको छ। डार्लिङ सेभेन र डार्लिङ एट नामक २ वटा स्मार्टफोन उसले बजारमा ल्याएको हो।
जल्ने र फुट्ने भएपछि एचपी ल्यापटपले ब्याट्री फिर्ता माग्यो
एजेन्सी, चैत १६ - एचपी ल्यापटप बनाउने कम्पनीले ल्यापटपको ब्याट्री फुट्ने र जल्ने समस्या आएको भन्दै विश्वभरबाट ब्याट्री फिर्ता मागेको छ। उसले विश्वभरबाट १ लाख १ हजार ल्यापटपको ब्याट्री फिर्ता मागेको हो। कन्ज्युमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमिसनले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, एचपी ल्यापटपको ब्याट्री निश्चित समयपछि धेरै तात्ने, जल्ने र फुट्ने समस्या देखिएको छ।
९ घण्टासम्म ब्याट्री टिक्ने एसरको नयाँ ल्यापटप
एजेन्सी, चैत १६ - इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस बनाउने ताइवानको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी एसरले बजारमा नयाँ ल्यापटप ल्याएको छ। एसर स्पिन थ्रि नामक ल्यापटप उसले बजारमा ल्याएको हो।
सावाकटहरेमा टेलिकमको बीटीएस टावर
खोटाङ, चैत २६ - जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने सावाकटहरेमा नेपाल टेलिकमको बीटीएस टावर जडान गरिएको छ। गत २०७२ साल वैशाख २८ गतेदेखि निर्माण कार्य थालिएको बीटीएस टावर जडान कार्य सम्पन्न गर्नासाथ सञ्चालनमा ल्याइएको निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष निरकुमार रानामगरले बताए।
फेसबुकको फिचरमा फेरि परिवर्तन
एजेन्सी, चैत १६ - सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले आफ्नो एप्समा परिवर्तन ल्याएको छ। स्यास्पच्याटमा जस्तै फेसबुकले क्यामरा सुविधामा केही नयाँ परिवर्तन दिएको छ। आइओएस र एन्ड्रोइड संस्करणमा फेसबुकले आफ्नो एप्समा गत मंगलबारदेखि लाइभ र फोटो स्टोरी राख्ने फिचर थप गरेको हो।
थाहा पाउनुहोस फेसबुकका यी १४ तथ्य
एजेन्सी, , चैत १५ - फेसबुक सबैभन्दा लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल बनेको छ। हामीमध्ये धेरैलाई हाम्रो फेसबुकमा दैनिक के के हुन्छ भन्ने कुरामा जानकारी नहोला। फेसबुकको एक बिलियन भन्दा धेरै दैनिक प्रयोगकर्ता रहेका छन्।
फोनमा ब्यालेन्स नहुँदा टेलिकमका ग्राहकले पनि ऋण पाउने
सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडौं, चैत १५ - नेपाल टेलिकमले जिएसएम तथा सिडिएमए प्रिपेड सेवाका सेवाग्राहीहरुलाई ब्यालेन्स नहुँदा फोन गर्न ऋण (लोन) उपलव्ध गराउने भएको छ। यस सम्बन्धमा नेपाल टेलिकम र हङकङ्गस्थित टिएक्साको लोकल एजेन्ट हेमन्त ट्रेड सेन्टरबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ।
काठमाडौ, चैत १३ - एनसेलका सबै ग्राहकले अब लोकल कलको दरमा नै विश्वका विभिन्न ३० मुलुकहरुमा कुरा गर्न सक्नेछन् । एनसेलले यही सोमबार (चैत्र १४) देखि लागु हुने गरी नयाँ योजना ल्याएको छ जसअन्तर्गत ग्राहकले कर बाहेक मात्र १.९९ प्रति मिनेटमा ती ३० मुलुकमा कुरा गर्न सक्नेछन् ।
९ रुपैयाँमै एनसेलको इन्टरनेट प्याक
सेतोपाटी संवाददाता , काठमाडौं, चैत ११ - एनसेलले ९ रुपैयाँमै २० एमबिको प्याक उपलव्ध गराएको छ। ३० दिने यो प्याक लिनका लागि एस्ट्रीक १२३ ह्यासट्याग डायल गरी १ रोज्नुपर्नेछ। २० एमबि सकिएपछि प्याक अवधिभर प्रतिएमबि करसहित १ रुपैयाँमा इन्टरनेट चलाउन सकिने कम्पनीले जनाएको छ।
एनसेलको आयमा इन्टरनेटको हिस्सा १८ प्रतिशत
सेतोपाटी संवाददाता , काठमाडौं, चैत १० - बढ्दो इन्टरनेट सेवाको माग र प्रयोगसँगै मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको यो सेवाबाट हुने आयमा पनि निरन्तर वृद्घि भइरहेको छ। जिएसएम मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलका अनुसार, उसको कुल आम्दानीमा इन्टनेट सेवाको योगदान १८ प्रतिशत रहेको छ।
विदेशबाट ‘कल’सँगै आउने डलर पनि घट्यो
रवीन्द्र शाही , ललितपुर, चैत १० - विदेशबाट नेपालमा फोन आउँदा आवाज मात्र होइन, त्योसँगै डलर पनि आउँछ यसरी आउने डलर पछिल्लो समय घट्दै गएको छ। दूरसंचार सेवाप्रदायकहरुको आयको मुख्य स्रोत र देशको लागि विदेशी मुद्रा आर्जनको पनि बलियो आधार मानिएको यो बाटो पछिल्लो समय खुम्चिने संकेत देखिएको छ। इन्टरनेटमा आधारित विभिन्न एप्लिकेशनको प्रयोग, देशभित्रकै सेवाप्रदायहरुको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय लामो दुरीको कल (आइएलडी) वापतको शुल्क घटेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ।
एनसेलका इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढे
सेतोपाटी संवाददाता , काठमाडौं, चैत १० - मोबाइल डाटाबाट इन्टरनेट चालाउनेहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। समग्र दुरसंचार क्षेत्रमै भ्वाइसभन्दा पनि डाटाको माग बढिरहेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको सेवाप्रदायक एनसेलका पनि डाटा प्रयोगकर्ताहरुको संख्या बढिरहेका छन्।
एक वर्षभित्र भूकम्प प्रभावित सात जिल्लामा ब्राेडब्यान्ड इन्टरनेट, २ दुईवर्षसम्म निशुल्क
सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडौं,चैत ९ - नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले अबको एकवर्षभित्र भूकम्पप्रभावित सात जिल्लामा न्यूनतम ५५६ केविपिएस गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउने भएको छ। ग्रामिण दुरसंचार कोषको रकमबाट प्रभावित सात जिल्लामा इन्टरनेट पूर्वाधार विस्तार गर्ने योजना बनाएको प्राधिकरणले दुईवटा प्याकेज बनाएर कार्य अगाडि बढाएको छ।
सेवा विस्तार गर्दै स्मार्ट टेलिकम
सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडौं,चैत ९ - दुरसञ्चार बजारमा अर्को प्रतिस्पर्धीका रुपमा हेरिएको स्मार्ट टेलीकमले सेवा विस्तारलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएइरहेको बताएको छ। विश्वमा भित्रिएको पछिल्लो दुरसञ्चार प्रविधिसमेतको जडान र प्रयोगको तयारीमा रहेको टेलिकमले जानकारी दिएको छ। केहि महिनाभित्रै आफ्नो सेवालाई विशेष कार्यक्रमबीच ग्राहक सामु पुु¥याउने तयारी गरिरहेको स्मार्टका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सजिन राजभण्डारीले बताए ।
नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा फेसबुक छिटो चल्ने
रवीन्द्र शाही , काठमाडौं, चैत ९ - तपाई नेपाल टेलिकमको नेटवर्कबाट फेसबुक चलाइ राख्नुभएको छ? यदी हो भने गएको केही दिनदेखि नयाँ महसुस गर्नुभएको होला। नेपाल टेलिकमले फेसबुकको क्यास सर्भर राखेपछि लोड हुने गति पहिलेकोभन्दा छिटो भएको टेलिकमले जानकारी दिएको छ। टेलिकमले फेसबुकको ‘क्यास सर्भर’ डाटालाई स्थानीयकरण गर्न नेपालमै सर्भर राखेपछि फेसबुकका ग्राहकले तीव्रता अनुभव गरिरहेको सहायक प्रवक्ता सोभन अधिकारीले जानकारी दिए।
फेसुबकमा आएको नयाँ फिचर, जुन तपाईँलाई थाहा नहुन सक्छ
एजेन्सी, काठमाडौं, चैत ८ - सामाजिक संजाल फेसबुकमा नयाँ नयाँ फिचरहरु आउने क्रम जारी छ। केही दिनअघि ह्वाट्सप र इन्स्ट्राग्राममा जस्तै फेसबुक म्यासेन्जरमा आफूलाई मनपरेको दैनिक फोटो र भिडियो अपलोड गरेर स्टाटस लेख्न मिल्ने फिचर ल्याएको फेसबुकले अहिले भने अर्को नयाँ फिचर थप गरेको हो।
रवीन्द्र शाही , काठमाडौं,चैत ७ - नेपाल टेलिकमले आगमी दिनमा इन्टरनेट सेवालाई प्राथमिकता दिने रणनीति बनाएको छ। प्रविधिको विकास र उपभोक्ताहरुको आवस्यकता,चाहनालाई ख्याल गर्दै खरो उत्रन भन्दै इन्टरनेट तथा डाटा सेवालाई परिस्कृत तथा सुधार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। पुरानो प्रविधिका सेवाहरुमा मुख्य लगानी रोकेर नयाँ प्रविधिमा विशेष प्राथमिकता दिँदै विस्ता
सेतोपाटी, काठमाडौं,चैत ७ - स्नापच्याट स्टोरीवाला फिचर फेसबुकमा पनि समावेश गरिएको छ। इन्स्टाग्राम र वाटस्एपमा आइसकेको यस फिचरलााई सर्वाधिक प्रयोगकर्ता रहेको फेसबुकले पनि समावेश गरेको छ।
चैत १२ देखि एनसेलबाट ट्वीटर चलाउन शुल्क लाग्ने
सेतोपाटी, काठमाडौं,चैत ७ - निजी क्षेत्रको दूरसंचार सेवाप्रदायक एनसेलले ग्राहकहरुलाई दिँदै आएको ट्वीटर र विकिपिडिया निशुल्क सेवा बन्द गर्ने भएको छ। कम्पनीले आगमी चैत १२ गतेदेखि उक्त सेवा बन्द गर्न लागिएको जानकारी दिएको छ। एनसेलले सन् २०१४ मेदेखि माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्वीटर निशुल्क ब्राउजिङको व्यवस्था गरेको थियो।
साझाका बसमा स्मार्ट कार्ड प्रयोग हुन थाल्यो
सेतोपाटी संवाददाता , काठमाडौं, चैत २ - साझा बसमा स्मार्ट कार्डको प्रयोग हुन थालेको छ। केही बसमा डिभाइस राखेर भाडा उठाउने कार्य सुरु भएको साझाका कामु कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए।
एप्पलमा 'सिरी'को आवाज दिने महिला को हुन् ?
एजेन्सी, चैत २ - ‘इन्टेलिजेन्स असिस्टेन्ट’ सिरी बारे एप्पलका उत्पादन प्रयोगकर्तालाई थाहै छ। एक महिलाको स्वर सुनिने सिरीमा अहिले भने पुरुषको पनि आवाज छ। तर लामो समयसम्म एप्पलमा महिलाकै आवाजमा सिरी चर्चित छन्।
दूरसञ्चारले ५१ प्रतिशत नगद लाभांस दिने
सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडौं,फागुन ३० - नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले सेयधनीहरुलाई ५१ प्रतिशत नगद लाभांस दिने निर्णय गरेको छ। कम्पनीको नवौं वार्षिक साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०७२।७३ को मुनाफा रकम मध्येबाट स्वीकृत चुक्ता पूँजीको ५१ प्रतिशतका दरले शेयर धनीहरुलाई नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
होलीको अवसरमा टेलिकमले ल्यायो बोनस तथा छुट अफर
सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडौ, फागुन २७ - नेपाल टेलिकमले होली पर्वका अवसरमा आफ्ना ग्राहकलाई बिभिन्न सेवाहरुमा सहुलियत दिने भएको छ। कम्पनीको चाडपर्व अफर अन्तर्गत जीएसएम र सिडिएमए पोष्टपेड तथा प्रिपेडका सेवाग्राहीलाई रिचार्ज कार्डमा डेटा बोनस, यूट्युब् डेटा प्याक र एसएमएस प्याक उपलब्ध गराउने भएको हो।
युटिएललाई ठेक्का दिन टेन्डरको शर्त नै गायब !
रवीन्द्र शाही , काठमाडौं, फागुन २७ - नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायक युटिएललाई प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबरको ठेक्का दिन पहिले प्रकाशित गरेको टेन्डरको शर्त नै परिवर्तन गरेको छ। गोरखाको आरुघाटदेखि रुकुमको मुसिकोटसम्म अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्नको लागि प्राधिकरणले २९ सेप्टेम्बर २०१६ मा सेवाप्रदायकहरुबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। सुरुमा टेन्डर आह्वान गर्दा राखिएको शर्तका कारण युटिएललाई ठेक्का दिन नमिल्ने भएपछि प्राधिकरणले उक्त शर्त नै हटाएर बाटो खुलाएको छ।
चैत १ देखि लाइसेन्सका लागि अनिवार्य अनलाइन फारम
सेतोपाटी संवाददता, काठमाडौं, फागुन २५ - यातायात ब्यवस्था कार्यलय एकान्तकुनाले चैत १ गतेदेखि लाइसेन्सको लागि लिखित फारम नबुझ्ने भएको छ। लाइसेन्सका लागि अब अनिवार्य अनलाइन फारम नै भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको कार्यालयका प्रमुख तेजनारायण यादवले जानकारी दिए।